साढे ३३ किलो सुन प्रकरण पुग्यो यस्तो अवस्थामा ,तस्कर समूहले प्रहरीलाई दियो यस्तो सनसनी पूर्ण बयान – बयान सहित ! – PathivaraOnline
Home > समाचार > साढे ३३ किलो सुन प्रकरण पुग्यो यस्तो अवस्थामा ,तस्कर समूहले प्रहरीलाई दियो यस्तो सनसनी पूर्ण बयान – बयान सहित !
साढे ३३ किलो सुन तस्करीका नाइके चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले आफ्नो सुन लुकाएको आरोपमा चारजना पूर्वसहकर्मीलाई मोरङको जंगलमा पुर्‍याएर यातना दिइरहेका थिए । उनलाई पिछा गर्दै मोरङको पोखरिया पुगेको प्रहरी टोलीले ‘रणनीतिक’ रूपमा फोनमा गरेको सम्झौताअनुसार गोरे मध्यरातमा मोरङको पोखरिया आउन तयार भएका थिए ।
भागरथी प्रकरणमा प्रहरीलाई मिलेको सफलतापछि यसरी सम्मान सहित बिदाई गरियो!